Madaxweyne Xaaf oo dib ugu laabanaya Dhuusamareeb, billo kaddib khilaafkii Ahlusuna -
HomeWararkaMadaxweyne Xaaf oo dib ugu laabanaya Dhuusamareeb, billo kaddib khilaafkii Ahlusuna
Madaxweyne Xaaf oo dib ugu laabanaya Dhuusamareeb, billo kaddib khilaafkii Ahlusuna
September 16, 2019 F.G Wararka 0
Madaxweynaha Galmudug ee Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa maanta dib ugu laabanaya magaalada Dhuusamareeb ee xarunta u ah dowlad goboleedka Galmudug.
Sida wararku sheegayaan Madaxweyne Xaaf ayaa la filayaa inuu qeyb ka noqdo wafdiga Madaxweyne Farmaajo ee maanta tagaya magaalada Dhuusamareeb, si ay uga qeyb galaan munaasabadda xiritaanka ee Shirka Dib u heshiisiinta Galmudug.
Axmed Ducaale Xaaf ayaa billo ka hor ka tagay Dhuusamareeb, kaddib khilaafkii soo kala dhex galay isaga iyo Ahlusuna, waxaana markii uu ka baxay magaalada oo uu tagay Cadaado ku dhawaaqay inuu burburay heshiiskii Galmudug iyo Ahlusuna.
Madaxweeyne Xaaf ayaa wixii xilligaas ka dambeeyay ku dhacday saldhig la’aan, markii dambena ka tago Cadaado, waxaana uu aaday Muqdisho oo uu heshiis hoose kula galay Madaxda dowladda Federaalka.
Sidoo kale Axmed Ducaale Geelle Xaaf qeyb kama aheyn dadaalada ka socday Dhuusamareeb ee ku aadanaa Dhismaha Maamul loo dhan yahay, waxaana bishii July ee sanadkan ku dhawaaqay inuu u wakiishay Wasaaradda arrimaha gudaha iyo Federaalka geeddi socodka dib u heshiisiinta iyo doorashooyinka Galmudug.